192.168.8.1 - कसरी पूर्वनिर्धारित राउटर IP खोज्ने?
कसरी पूर्वनिर्धारित राउटर IP खोज्ने?
तपाईंको राउटर कन्फिगर गर्न, तपाईंले यसमा लगइन गर्नुपर्नेछ। त्यसो भए तपाईले यो बुझ्नु पर्छ आईपी ​​ठेगाना। तपाईं पूर्वनिर्धारित राउटर आईपी ठेगाना सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ। आईपी ​​ठेगानामा numbers नम्बरहरू पूर्ण स्टपहरूको साथ विभाजित छन्। नेटवर्कको स्थानीय आईपी ठेगाना १4२.१192.168 को साथ सुरू हुन्छ। सामान्यतया राउटरहरूले IP ठेगानाहरू समावेश गर्दछ जस्तै १ 192.168.0.1 २.१192.168.1.1.०.१ वा १ XNUMX २.१.XNUMX.१.१। कम्प्युटर वा उपकरणमा निर्भर हुन्छ, तपाईले आफ्नो आईपी ठेगाना राउटर पत्ता लगाउनु हुने विधि बिभिन्न हुनेछ। प्रत्येकका लागि तल चरणहरू छन्।
सर्वप्रथम, तपाईले यी २ नामहरूको साथ आफैलाई बुझाउनु पर्छ - "राउटर आईपी" र "पूर्वनिर्धारित आईपी गेटवे।" राउटरको आईपी प्रकार्यहरू तपाईका उपकरणहरू र बृहत इन्टर्नेटको बीचमा प्रविष्टि जस्तो कि यो किन भनेर जान्न सकिन्छ "पूर्वनिर्धारित IP गेटवे ठेगाना" समान नेटवर्कमा लि All्क भएका सबै उपकरणहरू राउटरमा पूर्वनिर्धारित रूपमा आफ्ना मागहरू पुर्‍याउँछन्। विविध उपकरणहरूले यसलाई बिभिन्न रूपमा नाम दिनेछ। विन्डोज पीसीएसले यसलाई 'डिफल्ट गेटवे' नाम दिनेछ जबकि आईओएस उपकरणले राउटरको आईपी ठेगाना तल राउटर भण्डार गर्दछ।
तपाईंले डिफल्ट राउटर आईपी फेला पछाडि, तपाईं यसलाई वेब ब्राउजरको ठेगाना बारमा राउटरहरू वेब इन्टरफेस प्रविष्ट गर्न लेख्न सक्नुहुन्छ।
खोजी पट्टी र 'सेमीडी' लेखेर पुनःप्राप्ति द्वारा प्रम्प्ट आदेशमा जानुहोस्। कालोमा विन्डो देखा पर्छ जहाँ तपाईं 'ipconfig' लेख्न आवश्यक पर्दछ। परिणामका लागि पूर्वनिर्धारित गेटवे ठेगाना ब्राउज गर्नुहोस्।
तल राउटर आईपी जाँच गर्न सब भन्दा सजिलो चरणहरू छन्:
थिच्नुहोस् एप्पल मेनू (स्क्रिन माथि)
चयन गर्नुहोस् 'प्रणाली पहिलो छनौट'
लागू नेटवर्क लि link्क छान्नुहोस्
धकेल्नुहोस्टीसीपी / आईपीकुञ्जी राउटरमा IP ठेगाना स्पट गर्न
सर्वप्रथम, मार्ग पत्ता लगाउनुहोस्: अनुप्रयोगहरू> प्रणाली उपकरणहरू> टर्मिनल & लेख्नुहोस् 'ipconfig'। तपाईं राउटरको आईपी 'inet adder' को अलावा सूचीबद्ध पाउनुहुनेछ।
यदि तपाईं आईओएस or वा आईओएस use प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, सेटिंग्स> वाइफाइमा नेभिगेट गर्दै र वायरलेस नेटवर्कहरू थिच्नुहोस् जुन तपाईं हालसालै संलग्न हुनुहुन्छ। राउटरको आईपीमा पत्ता लगाउनको लागि DHCP भाग सम्भव छ।
वाई-फाई एनालाइजर भनेर चिनिने तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोग एन्ड्रोइड उपकरणहरूको लागि सजिलो तरीका हो। अनुप्रयोगमा जडान पछि, 'दृश्य' मेनूमा हिट गर्नुहोस् र 'एपी सूची' चयन गर्नुहोस्। तपाईं देख्नुहुनेछ 'लि to्क गरिएको: [नेटवर्क नेम]'। यदि तपाईंले यसमा हिट गर्नुभयो भने, एक विन्डो राउटरको आईपीको साथ नेटवर्कको जानकारी प्रदर्शित हुन्छ।
टास्कबारमा चेतावनी क्षेत्र थिच्नुहोस्। त्यसोभए, सूचीमा [नेटवर्क नेम] सँग जोडिएको थिच्नुहोस् जुन बाहिर आउँछ। राउटरको आईपी ठेगानाको साथ फलोआउटहरू देखाउन वायरलेस नेटवर्कको नाम र अर्को 'नेटवर्क' लेबलमा हिट गर्नुहोस्।
पूर्वनिर्धारित राउटर IP खोज्ने तरिका
राउटरको पूर्वनिर्धारित IP ठेगाना पत्ता लगाउन तल दिइएका चरणहरू अनुसरण गर्नुहोस् -
१) टास्कबारको स्टार्ट मेनू र इनपुट भ्रमण गर्नुहोस् सीएमडी खोज फिल्डमा।
२) तपाईंले सीएमडी कमान्ड घुसाएपछि, कालो डिस्प्लेको साथ प्रम्प्ट कमाण्ड फेला पर्नेछ।
)) आदेश 'लेख्नुहोस्ipconfig', प्रम्प्ट आदेशमा। यस कमाण्डमा शामेल छ - प्रणालीको पूर्वनिर्धारित आईपी सेटिंग्स र कन्फिगरेसनको साथ यसले जोडिएको राउटरसँग प्रदर्शन गर्दछ।
विन्डोजमा आईपी ठेगाना राउटर पत्ता लगाउने तरिका
खोजी पट्टीमा नियन्त्रण कक्षमा लेख्नुहोस् र आइकनमा थिच्नुहोस् कन्ट्रोल प्यानल;
नेटवर्क रैंक र अन्तर्गत कार्यहरू थिच्नुहोस् इन्टर्नेट र नेटवर्क;
वाइ-फाइको नाममा थिच्नुहोस्, जुन तपाईं जडानहरूको नजिक फेला पार्न सक्नुहुन्छ;
भर्खरको विन्डो देखा पर्नेछ। विवरणमा थिच्नुहोस्;
तपाईं पाउनुहुनेछ साझा IP ठेगाना IPv4 पूर्वनिर्धारित गेटवेमा।
विभाग कसरी मेल अन्वेषण
तपाईंको राउटरलाई पूर्वनिर्धारित सेटिंग्समा रिसेट गर्नुहोस्